Inoraswa Medical Face Mask, Virus Tube, Sampling Tube - Limeng
Shandong Limeng Pharmaceutical Company yakavambwa muna1993, ikozvino yave neyechinyakare yechinyakare Chinese mushonga, chikafu-chekuchengetedza chikafu, zvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa, zvigadzirwa zvekurapa uye zviridzwa musangano, sterilization inopa workshop uye yechinyakare Chinese mushonga wekuchera musangano, uye ese akapfuura. zana-chiuru chekuchenesa musangano chitupa. Iyo kambani yanga yakagara yakanamatira kune yekusimudzira pfungwa yeepamusoro-tech kutungamira, uye indasitiri-yunivhesiti-yekutsvagisa kudyidzana. Iyo ine timu yehunyanzvi yeR & D timu, musana wehunyanzvi uye mahunyanzvi. Iyo kambani inovavarira kuvandudza iyo marongero esheni, uye iyo mhando "Limeng" yakapihwa seMaspala Akakurumbira Chiratidzo cheJinan muna 2012.
Shandong Limeng Pharmaceutical Co, Ltd.
Iyo kambani yanga yakagara yakanamatira kune yekusimudzira pfungwa yeepamusoro-tech kutungamira, uye indasitiri-yunivhesiti-yekutsvagisa kudyidzana.
R & D ruzivo
Anokwanisa R & D mainjiniya achave aripo kubvunza kwako sevhisi uye isu tichaedza nepatinogona napo kusangana nezvaunoda.
Mhinduro dzedu dzine mvumo yenyika yekubvumidzwa kune vane ruzivo, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mutengo unodhura ...
Parizvino kambani iyi ine zvekushandisa zvekurapa uye zviridzwa musangano unopfuura zviuru zviviri zvemamirimita, chiyero chehutano-chekuchengetedza chikafu chegumi remamirioni emamirimita, uye mafomu edhisheni anosanganisira macapsule, piritsi, granules uye upfu nezvimwe.
102020 / Gumiguru